Nagarik Shukrabar - ‘अनुहार मात्रै राम्रो खोजेर त के लाइफ बित्ला र !’ : अास्था राउत
शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : ४२
‘अनुहार मात्रै राम्रो खोजेर त के लाइफ बित्ला र !’ : अास्था राउत
शुक्रबार, १८ जेठ २०७५, ०२ : १३ | अनिल यादव
अरू गायक/गायिकाका गीत गन्नैनसक्ने गरी आइरहन्छन्, तपाईंको हकमा संख्या किन कम ?
म संख्यामा होइन स्तरमा विश्वास गर्छु । जे पाए त्यही गीत गाएर मलाई चर्चामा आउनु छैन । न त्यसरी विवादमा पर्नु छ, न भाइरल हुनु छ । नेपाली संगीतमा दर्शक/श्रोतालाई राम्रो र स्तरीय गीत दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । एउटा संस्कार बोकेको, सकारात्मक सन्देश बोकेको गीत आउनुपर्छ ।
बेलामौकामा अलिकति विकृति फैलाउने खालका गीत आउँछन् तर त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिलेको म्युजिक अलि खुल्दै गइरहेको छ, बाँधिएको छैन जुन राम्रो पक्ष हो । अलि ‘रिल्याक्स्ड’ र ‘जोली’ पाराको क्या ! ज्यादा रोनाधोना छैन । दुःख त जिन्दगीमा सधैँ छ । यसले त कसैलाई पनि छोड्दैन । तर दुःख भयो भन्दैमा खालि दुःखी, मन दुख्ने र रुवाउने गीत नै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले मान्छेहरूलाई जीवनप्रति सकारात्मक बनाउने खालका गीत बनिरहनुपर्छ, बनिरहेका पनि छन् । दर्शक/श्रोतालाई पनि मेरो अनुरोध छ, ‘खुसी खोज्न बाहिर नभौँतारिनुस्, पहिला घरबाटै सुरु गर्नुस् ।’
मेला/महोत्सवतिर ज्योति मगरलाई प्रतिबन्ध नै लाउनुपर्छ भन्ने आशयको स्टाटस लेख्नुभएको थियो !
उहाँको आफ्नै शैली छ, फ्यान फलोइङ आफ्नै छ भने मेरो आफ्नै । अन्तर्वार्ता ज्योतिजीप्रति फोकस्ड भएजस्तो लाग्यो तर फेरि पनि भन्छु, मैले उठाएको विषय प्रवृत्ति लक्षित हो । मेला/महोत्सवमा बच्चाहरू पनि आउँछन् त्यसैले कम्तीमा त्यहाँ प्रस्तुत हुँदा भद्दा र अश्लील नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो गुनासो हो । किनकि त्यसले स–साना बच्चाको मनोविज्ञानमा असर पु¥याउन सक्छ । १८ वर्षभन्दा माथिकालाई ठिकै छ तर त्योभन्दा मुनिका पनि सहभागी छन् भने पक्कै सोच्नुपर्छ । म कसैको लुगाको मापन गरिरहेको छैन, मात्रै अश्लील सुनिने शब्दका वाणीप्रति गुनासो हो । आफ्नो जवानमा लगाम लाउनुपर्याे क्या ! कि त १८ वर्ष मुनिकालाई त्यस्ता मेला/महोत्सवमा जान दिनुभएन, कि त प्रस्तुति सभ्य र शालिन हुनुपर्याे । योभन्दा बढी यो विषयमा कुरा नगरौं ।
मान्छेहरू म फ्र्याक छु, बोल्छु, हाँस्छु भन्दैमा ट्याग लाइदिने रैछन् । मलाई नै फलानासँग तेरो अफर छ रे भनेर एउटाले सोध्यो । अनि रिस उठेर लेखेको हो । अहिले मेरो दुईजना बेस्टफ्रेन्ड नै केटाहरू छन् । अब उनीहरूसँग नाम जोड्ने त ? केटा/केटी सँगै हिँड्दैमा ब्वायफ्रेन्डको ट्याग लगाइदिने, योसँग सियोर अफेयर छ भनेर दाबी गरेको चाहिँ मलाई मन पर्दैन । अरे यार, खा’को विष पो लाग्छ त, नखा’को किन ?